Satashikhabar.com गहन विश्लेषण र मूल्याङ्कनपछि मात्र शेयरमा लगानी गर्नु उपयुक्त - satashikhabar.com
गहन विश्लेषण र मूल्याङ्कनपछि मात्र शेयरमा लगानी गर्नु उपयुक्त
विगतमा काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित भएर गरिने शेयर बजारको कारोबार अहिले सूचना प्रविधिको पहुँच बढेसँगै देशका हरेक शहर, बजार, गाउँ तथा घरघरसम्म पैmलिएको छ । शेयर बजार आर्थिक लगानीसँग सम्बन्धित कारोबार भएकाले यसमा सहभागी हुनु अघि शेयर बजार सम्बन्धी आवश्यक आधारभूत जानकारी लिन अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले शेयर बजार सम्बन्धी जानकार आशिष बस्नेतसँग हाम्रा प्रतिनिधि पवन चाम्लिङ राईले गरेको कुराकानीको अंशः
के हो शेयर बजार ?
— कुनै पनि कम्पनीलाई सञ्चालनको निमित्त पूँजीको आवश्यकता पर्दछ । सो पूँजी संकलनको लागि शेयर, ऋणपत्र, बण्ड आदि जारी गरेर कम्पनीले आफूले चाहिएको रकम संकलन गर्न सक्दछ । ती विकल्पहरु मध्ये एक विकल्प शेयर हो ।
मानौं कुनै कम्पनीलाई एक करोड रुपैयाँको आवश्यकता पर्दछ भने उसले १०० रुपैयाँ प्रति कित्ताको एक लाख कित्ता शेयर जारी गर्न सक्छ । जसलाई हामी IPO (Initial Public Offering) भनेर सुनिरहेका हुन्छौं । सो शेयरलाई NEPSE मा सूचीकृत गराई किनबेच गराउने ठाउँलाई शेयर बजार भनिन्छ । शेयर बजार यस्तो ठाउँ हो जहाँ विभिन्न कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण तथा ग्रहण सजिलै गर्न सकिन्छ ।
शेयर बजारमा कसरी प्रवेश गर्ने ?
— कुनै पनि बैंक वा Broker मा गएर DEMAT खाता खोले पश्चात Broker मार्फत KYC Update गरेर शेयर कारोबार गर्न सकिन्छ ।
शेयर बजारबाट कसरी कमाउने ?
आजकल ठूला व्यवसायीदेखि निम्न आयस्रोत भएका वा नभएका विद्यार्थीवर्गले पनि आफ्नो कलेजको फि, खाजा खर्च निकाल्न शेयर बजारबाट सम्भव भएको कुरा चर्चामा छ । अहिले शेयर बजार Bull Trend मा चलिरहँदा कमाउन निकै सहज हुने भएता पनि Bull Trend सकिएपछि शेयर बजारबाट कमाउन त्यति सहज हुदैन । महान शेयर लगानीकर्ता Warren Buffet को शेयरबाट कमाउने मन्त्र “Be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy.” अर्थात् बजारमा सबै लोभिइरहँदा आफू डराउनु र अरु डराइरहँदा आफू लोभिनु । यसको अर्थ सबै जना शेयर मूल्य अझै बढ्छ भनेर लोभिइरहँदा आफू सतर्क रहनु र सबै बजार घट्छ भनेर बेचिरहँदा मूल्य सस्तो हुन्छ र त्यो समयलाई शेयर किन्ने मौकाको रुपमा लिनु भन्ने हो ।
केको आधारमा लगानी गर्ने ?
— कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई विश्लेषण (मूल्याङ्कन) गर्नु आवश्यक रहन्छ । शेयरको आधारभूतर प्राविधिक विश्लेषणको ज्ञान लिन विभिन्न किताब, अनलाइन तालिमहरु, यूट्युब मार्फत लिन सकिन्छ । अनलाइन तालिमका लागि merolagani.com मा शुल्क तिरेर तालिम लिन सकिन्छ ।
तर मेरो विचारमा सबैभन्दा ठूलो कुरा अनुभव लिनु हो । थोरै रकमबाट बजार प्रवेश गर्दा बजारलाई धेरै नजिकबाट बुझ्न सकिन्छ । शेयर बजार भनेको एउटा समुद्र हो, जति पैसा खन्याए पनि कम लाग्ने र बुझेर कहिल्यै नसकिने । त्यसैले अनुभव लिँदै गएमा दिनदिनै यसप्रति चासो र ज्ञान बढ्दै जान्छ । merolagani.com, nepalstockexchange.com, nepalipaisa.com, sharesansar.com आदि पेजहरुबाट विभिन्न शेयर सम्बन्धी सूचना लिन सकिन्छ । मुख्यतः कम्पनीको कमाई, त्यसका प्रोमोटरहरु कस्ता छन्, लाभांशको क्षमता र इतिहास आदि कुराहरु हेर्न आवश्यक हुन्छ । सामान्यतया EPS (Earning per Share) अर्थात् प्रति शेयर आम्दानी (जति धेरै त्यति राम्रो) र अन्य विभिन्न सूचकहरु हेरेर लगानी गर्दा लगानी डुब्ने खतरा न्यून हुन्छ ।
बुल र वियरिस (Bull and Bearish) Market बारे भन्नुस् न ।
— बढ्दो क्रममा रहेको शेयर बजारलाई Bull Trend मा छ भन्ने बुझिन्छ भने घट्दो क्रममा रहेको शेयर बजारलाई Bear Trend भनिन्छ । बजार जहिल्यै Bull Trend मा पनि रहन सक्दैन र जहिल्यै Bearish Trend मा पनि रहदैन । विगतलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा हरेक चार पाँच वर्ष Bull Cycle र Bear Cycle को अवधि रहेको पाइन्छ तर जहिले चार पाँच वर्ष रहन्छ भनेर भन्न सकिदैन ।
१८८१ अंकसम्म पुगेको NEPSE पछि घटेर ११०० अंकतिर आइपुगेको थियो, त्यसबेला Bearish चार वर्ष जति चल्यो र अहिले पुनः फेरि बजारले Bullish Trend पक्डेर बजार ३२०० करिब पुगेको छ । तर Long run मा बजार जहिल्यै बुलिस ट्रेन्डमै हुन्छ अर्थात् विगतको उच्च विन्दुलाई जहिल्यै पनि बजारले उछिन्दै जान्छ ।
किन शेयर बजार घट्छ र बढ्छ ?
— माग र आपूर्तिको सन्तुलन नहुँदा शेयर बजार घटबढ हुन्छ । माग बढे बजार बढ्ने र घटे घट्ने हुन्छ । सरकारको नीति र स्थायित्व, देशको अर्थतन्त्र, धितोपत्र बोर्ड तथा नियामक निकायहरुको नियम, नीति, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक तथा अन्य नीति, सम्पत्तिको वित्तीय अवस्था, ऋण प्रवाह, व्याजदर आदि कुराहरुले समग्र शेयको माग र आपूर्तिमा असर पार्दछ ।
हाल Hydro को शेयरमा उछाल आएको, कसैले विरोध गरिरहेका छन् ? किन ?
— करिब दुई वर्ष अघि केही हाइड्रोपावरको शेयर ५० रुपैयाँ भन्दा तल पाइन्थ्यो, हाल यसको मूल्य करिब ५०० रुपैयाँ छ । हाल हाइड्रोपावर कम्पनीहरुलाई दिइएको सुविधा जस्तै बैंकको व्याजदरमा कमि, नाफामा वृद्धि तथा Right Share जारी गर्न दिने जस्ता कुराहरुले हाइड्रोको मुल्यमा उछाल आएको हो । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु । तर घाटामा गएका कम्पनीहरुमा लगानी गर्दा हाइड्रोमा मात्र नभएर जुनसुकै कम्पनीमा लगानी डुब्न सक्छ भन्ने हो ।
नवप्रवेशीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
— कसैको उक्साहट तथा हल्लाको भरमा भन्दा पनि Market Momentum र Sentiment लाई बुझ्दै लगानी गर्न जरुरी छ । धेरै व्याजदरमा कमाइने रहेछ भन्दै ऋण ल्याएर लगानी गर्दा बुलमा फस्न पनि सकिन्छ । त्यहि भएर लोभ र डरलाई नियन्त्रणमा राख्दै नवप्रवेशीहरुले यो बुललाई सिक्ने मौकाको रुपमा लिँदा Productive हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने बजारले कमाउने मौका त दिइनै रहन्छ ।
बजार कता जाला अब ? मार्जिन ल्यान्डिङले बजार घट्छ भन्छन् नि ।
— शेयर बजारको सुन्दरता भनेकै यसलाई Predict गर्न नसक्नु हो । आ–आफ्नै अनुभव र विश्लेषणको आधारहरुमा यता जाला, उता जाला भन्न सकिन्छ तर त्यो पूरा नहुन पनि सक्छ । हाल बजारलाई मा कडाई, नियामक निकायको विज्ञप्ति आदि कुराहरुबाट प्रहार गर्ने खोजिरहेको छ, तैपनि बजारले यी कुराहरुलाई पछ्याउँदै अघि बढिरहेको छ । यसैको आधारमा मेरो विचारमा बजार केही समय Bullish Trend मै रहन्छ जस्तो लाग्छ ।
मार्जिन ल्यान्डिङ भन्नाले शेयर धितोमा राखेर लिइने लोन हो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले यो सीमा घटाएर १२ करोडमा ल्याइदियो । यसले गर्दा ठूला खेलाडीहरुले भटाभट शेयर बेचिरहेका छन् । त्यसैले व्यापार घटिरहेको छ । तर केही समय लाग्न सक्छ, बजार घटे पनि लयमा फर्किन्छ जस्तो लाग्छ । यसको लागि राष्ट्र बैंक केही लचिलो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सहारा सतासी महिला मौरी मह उद्योगको व्यावसायिक गतिविधिसम्बन्धी अन्तर्क्रिया
दमकमा हेल्दी फ्रेस एण्ड मिट मार्ट’सहित ‘यावा रेष्टुरेन्ट एण्ड सेकुवा कर्नर सञ्चालनमा
नगरको वडा नं. १० का सम्पूर्ण पसलहरु एक साताका लागि बन्द : ब्रोइलरको दानाको पसलमात्र खुल्ला, दूध डेरी...
भ्यालेनटाइन डेको अवसरमा आन्छी क्याफेमा चर्चित डिजे जानू गुरुङको विशेष प्रस्तूती
फुलबारी सेवा संगमको नेत्तृत्वमा पुन ः सेरेङ